ဦးဂင်ကြီး: 9/1/08 - 10/1/08
‘ သစ္စာသေသော် ’
ပြာချပစ်တာ အကောင်းဆုံး ၊၊
စိုက်တဲ့ပန်းပင် ဂုဏ်ပျက်နိုင် - ၊၊
မုန်းသူတွေက ပန်းခွေ ချ ပြီး
မြွက်ကြားသီဟ ဂုဏ်ပြု ကြ ပေါ့...
ချစ်ဦးသူတွေ... မိတ်ဆွေတွေ ကား
ပန်းခွေချဖို့ ဝေလာဝေး ၊၊ ၊၊
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 6:58 AM , 1 comments
ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မှုန်တိုင်းသတင်းတွေ ဆက်တိုက်ပါလာပြီး တနေ့ထူးထူးခြားခြား တနေရာ မှာ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ပြိုပျက်လဲကျ ကုန်ပေမဲ့ အိမ်တလုံးက ထီးထီးကြီး ကျန်နေ ခဲ့တာ တွေ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအားလုံးကလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာ။ မှုန်တိုင်းလာတော့မယ် ဆိုရင်ပဲ လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေကိုရွေ့ဖို့ အစိုးရကစီစဉ်တော့ မရွေ့ချင်တဲ့သူကရှိသေးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ပျက်စီးကြေမွနေပေမဲ့ သေဆုံးတဲ့စာရင်းက ဆယ်ဂဏန်းထက်မပို။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်မယ့်သမ္မတတွေကလည်း စာနာစိတ်တွေနဲ့ သူတို့ကိစ္စကိုဦး စား မပေး။ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုပေမဲ့ သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက် မျှမျှတတ။ သြော်.. လူလူခြင်း အတူတူတောင် လူဖြစ်ရတဲ့ ဘဝခြင်းက မတူ။ အင်း… တူအောင်ညှိဖို့ကလည်း သကြားမင်း တောင်မတတ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။
တို့ဗမာပြည်မယ်လေ… သူများနိုင်ငံလို လေမှုန်တိုင်းခဏခဏတိုက်လို့ကတော့ အခု လောက်ဆို လူတွေ ( ပြည်သူ ) တောင်ကျန်ပါ့ တော့မလားပဲ။ မေလဆန္ဒခံယူပွဲကိုဖျက်ဖို့ အချိန်ကိုက်ရောက်လာတဲ့ မှုန်တိုင်းကိုတောင် န.အ.ဖက ဂရုမစိုက်။ သူမိုက်ချင်သလို မိုက်ရဖို့ အတွက် လိုင်စင်ရရေးကို ဦးစားပေးလုပ်သွားလိုက်တာ ကမ္ဘာကတောင်တုန်လှုပ်ရတဲ့အထိ။ အဲ့ဒီအချိန်က ရင်ထဲမှာမခံချိမခံသာနဲ့ ဘာ လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိနိုင်အောင် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်က အတုံးအရုံးသေဆုံးနေကြတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြည်ရင်း တချိန်လုံးငိုနေ မိတာ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကောင်လေးတယောက်လည်း ဒီအထဲပါသွားပြီလား။
၁၉၉၂- ၁၉၉၃ ကိုယ်အဝေးသင် တက်တုန်းကပါ။ ကျောင်းက စာပေးပွဲဖြေကာနီးမှ ၁၀ ရက်လောက်ကျောင်းတက်ရတာဆိုတော့ မူလ တန်းကျောင်းလေးတခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေခဲ့ တယ်။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းက ဧရာဝတီမြစ်ချောင်းနားက မြစ်ကျိုး ဆိုတဲ့ရွာကလေး။
ရေပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့ ကုန်းလို့ဆိုရပေမဲ့ ကုန်းပေါ်မှာလည်း ရေတွေ။ လယ်ကွင်း တွေရဲ့ဘေးမှာ ကျမသင်ရတဲ့စာသင်ကျောင်း။ လမ်း ဆိုလို့ ကျောက်တုံးကလေးတွေ ခင်းထား ပေမဲ့ မြေနီစေးစေးတွေကြောင့် လမ်းလျှောက်ရအတော်ခက်တဲ့နေရာ။ မနက်ဆို ကျောင်းရှေ့ မြစ်လက်တက်လေးမှာ မုန်းဟင်းခါးသည်က လှေလေးတစင်းနဲ့။ ကိုယ့်နေရာက ကျောင်း ထောင့်မှာ အခန်းငယ်လေးဖွဲ့ပေးထားတယ်။ ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ ဆရာမနဲ့ နှစ်ယောက်အ တူတူ။
ကလေးတွေက ပညာလိုချင်ရှာကြလို့သာ။ ကျောင်းကိုလာရတဲ့လမ်းက ဗွက်တတန်၊ ရေတတန်။ လယ်ကွင်းတွေကိုဖြတ်ပြီး လာလိုက်ကြ တာ၊ ကျောင်းရောက်ရင် တကိုယ်လုံးဗွက် တွေလူးလို့။ ကျောင်းရှေ့ကရေကန်မှာ ပေနေတာတွေကိုဆေးပြီး အပိုယူလာတဲ့အဝတ်နဲ့လဲ ကြရတယ်။ လက်တွေ့ဘဝကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေက သူတို့နေရာနဲ့သူတို့ အသုံးချတတ် ကြတယ်။ စာသင်ခန်းဆိုတာကလည်း အ မိုးနဲ့အကာသာရှိပြီး ကြမ်းခင်းကမရှိ။ တခါတခါ မိုကြီးလာရင် စာသင်ခန်းထဲအထိ ရေဝင်တတ်လို့ ခြေတံရှည်ခုံကလေးတွေနဲ့ သင်ကြရ တာ။
ကျောင်းဖွင့်ရင်စာသင်ကြ၊ ကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကဖိတ်လို့ သူတို့အိမ်တွေကိုအလည်သွား။ ထမင်းစားသောက် ပြီးမှပြန်ကြတာ။ အိမ်အတည်တကျမရှိ။ ကျောင်းထောင့်ကအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနေကြရလို့ ရပ်မိရပ်ဖတွေက သနားကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ ဟိုအိမ်ကဖိတ်၊ ဒီအိမ်ကဖိတ်နဲ့ ။ တခါတလေဗွက်တောထဲသွားလာ ရပျင်းတာနဲ့ အတင်းကိုငြင်းရတယ်။ နောက်ပိုင်းကြတော့ ငြင်းတဲ့အကြောင်းကိုရိပ်မိပြီး ကလေးတွေနဲ့ဟင်းပို့ခိုင်းတဲ့အထိ။ တခါတလေ သူတို့အိမ်မှာ ဟင်းကောင်းလေး စားရတဲ့ အချိန်တွေမှာပေါ့။ ရိုးသားတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေက ဆရာမတွေအပေါ် အဲ့ဒီလောက်ချစ်ကြ တာပါ။
ကိုယ်တွေကလည်း ကလေးတွေကိုသံယောဇဉ်တွေဖြစ်လို့။ အဲ့ဒီမှာ ဇော်ဆိုတဲ့ကောင် လေးကို ကိုယ်ကပိုတယ်။ ပုတက်တက်ကလေးနဲ့ အရမ်းသွက်တဲ့ကလေး။ ဒုတိယတန်းမှာ စာသင်နေပေမဲ့ သူ့အသက်က လေးတန်းလောက်တက်လို့ရနေပြီ။ စာဆိုရင်အရမ်းတတ် ချင် တဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့၊ သူကျောင်းမှန်မှန်မတက်နိုင်ဘူး။ မိဘတွေရဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ် များရင်ဝိုင်းကူရလို့လေ။ သူ့လိုကလေးတွေက အများကြီးပါပဲ။ ခိုင်းမကောင်းသေးတဲ့ အရွယ် လေးတွေဘဲ ကျောင်းမှန်မှန်တက်ကြရတာ။ ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ရက်တွေဆို စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ကျောင်းပိတ်ရက်နဲ့ အစားထိုးသင်ပေးရတယ်။ ဒါလည်းသူတို့အားတဲ့အခါမှပါ။ တခါတလေ သူတို့ကိုကြိုးစားသင်ထားပေး ပေမဲ့ စာမေးပွဲဖြေချိန်မှာ ပေါ်မလာကြလို့လည်း ရင်မောရသေး တယ်။ ကျမတို့လည်း စာတတ်ဖို့အတွက် ရုံးကန်ခဲ့ရပေမဲ့ သူတို့ လောက် မခက်ခဲခဲ့။ ဘဝတွေက တဖြည်းဖြည်း ကြပ်ကြပ်လာလိုက်တာ ကြာရင်အသက်ရူရပ်သွားကြမလားပဲ။
အဲ့ဒီရွာလေးမှာ ကျမပျော်ရွင်ခဲ့ပေမဲ့ မနေချင်အောင်ဖြစ်လာတဲ့တနေ့။ အဲ့ဒီနေ့က ရွာထဲကို စစ်သားစုဆောင်းရေးက တပ်ကြပ်တဦီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်သားတွေရောက်လာ တယ်။ ရွာလေးဆိုတော့ ရွာသားအားလုံးစုရုံးဖို့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဆိုလို့ ကျမတို့နေတဲ့ စာသင်ကျောင်းလေးဘဲရှိတာကိုး။ သူတို့ကျောင်းမှာစုကြမဲ့အကြောင်း မိဘတယောက်ကလာ ပြောပြီး၊ ကျောင်းမှာလူစုကြတဲ့အချိန် သူ့အိမ်မှာနေချင်လျှင်နေနိုင်ကြောင်း ကျမတို့ကိုခေါ် ပါတယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေကိုမမြင်ချင်လို့ ကျောင်းသားအိမ်မှာသွားနေပေမဲ့၊ သေးငယ်တဲ့ ရွာလေးမှာ သတင်းကချက်ခြင်းရတယ်။ ဒီရွာက လူနှစ်ယောက် စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ရမယ်။ လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ဝင်မဲ့သူမရှိရင် မဲနှိုက်ရမယ်တဲ့။ မဲပေါက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ဖို့ တရွာလုံးက ငွေထည့်ရမယ်တဲ့။ ရတဲ့ငွေရဲ့တဝက်ကို သူတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲ ပေးမယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့ငွေက သူတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ တပ်ကြပ်ကြီးက သိမ်းထားရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ကိုပေးမဲ့ငွေက ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုအတွက်တဲ့။
အဲ့ဒီနေ့ကတယောက်က သူ့သဘောနဲ့သူဝင်သွားတယ်။ ရွာတောင်စွန်းက သားအမိ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ ကိုရှည်ကြီး။ ရှာစားရခက် ခဲလွန်းလို့ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်ဖြစ်ရှာတဲ့ အမေအိုကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်လို့တဲ့။ နောက်တယောက်ကတော့ မဲပေါက်သွားတဲ့ ၁၆နှစ် သာရှိ သေးတဲ့ မောင်သိန်းဦး။ အားကိုးနေရပြီဖြစ်တဲ့ သားကြီးအတွက် မိဘတွေမှာမျက်ရည်တွေနဲ့။ ကျောင်းတောင်မတက်တော့ပဲ မိ သားစုအတွက်အလုပ်လုပ်နေရရှာတဲ့ မောင်သိန်းဦးက သူ့ ဝေစုရတဲ့ ငွေလေး ကျပ် ၇၅၀ နဲ့ မိဘတွေကိုကန်တော့ခဲ့ရတယ်။ မိုးချုပ်ခါနီးနေပေမဲ့ သူတို့ ကမပြန်သေး။ လမ်းမမြင်ရရင် ပြန်လို့မတတ်မှာစိုးလို့ ကျောင်းနောက်ပေါက်ကနေ အခန်း ကျဉ်းလေးထဲဝင် လိုက်တော့ ဝေစုခွဲနေတဲ့ တပ်ကြပ်ဖြစ်သူရဲ့အသံကို ကြားရတယ်။ ရွာကနေ စုစုပေါင်းရတာက အဲ့ဒီအချိန်က ကျပ်ငွေသုံးထောင်။ အိမ်အရေအတွက်ကိုမေးပြီး ဒီလောက်ရ အောင်ခွဲကောက်လိုက်တာလေ။ ကျပ် ၁၅၀၀ ကိုစစ်ထဲဝင်ရမဲ့သူတွေကို ခွဲပေးပြီး၊ ကျန်တာကို အဆင့်အလိုက်ဝေယူကြတာ။ တော်သေးတာပေါ့ ဒီတခါလာတာ တပ်ကြပ်ကအကြီးဆုံးမို့လို့ ဒီလောက်နဲ့ပြီိးသွားတာတဲ့။ လူခံတွေက ပြောကြတယ်။ သြော်.. သူတို့က ခံနေကျလူတွေကိုး။
ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ကောင်လေးကို ဒီဒုက္ခတွေ ကလွတ်အောင် မြို့မှာလိုက်နေချင်ရင် ကျောင်းထား ပေးမယ်ဆိုတော့၊ ရေမရှိတဲ့နေရာမို့ မလိုက်ချင်ပါဘူးတဲ့။ ကျမနေတဲ့မြို့လေးရဲ့ အလှဘွဲ့ကို သူတို့ကိုစာသင်ရင်း ပြောပြဖူးတာကိုး ကုန်းမြေမြင့်မြင့် မှာ ဘုရားစေတီတွေနဲ့ လှပတဲ့ငါတို့မြို့လေးက ဒီမှာလို ရေတွေ၊ ဗွက်တွေ မရှိဘဲ အိမ်ရှေ့လမ်းလေးကို တံမျက်စည်း နဲ့လှည်းလိုက်ရင် ချောပြောင်နေတာ သံမံတလင်း ကျနေတာဘဲလို့။ ပင်လယ်ပျော်တဲ့ ဇော်လေးက မလိုက်ချင်ပါဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဇော်လေးက အခုကျမသမီးကြီးအရွယ်ဘဲရှိအုန်းမှာပေါ့။ အခု ကျမသမီးကြီး ၁၀ နှစ်က တောက်တိုမယ်ရလေးခိုင်းရင် တောင် ပင်ပန်းနေတတ်တာ။ သူတို့ဘဝလေးတွေနဲ့တော့ တခြားစီပါဘဲလေ။
မေလတုန်းက တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မှုန်တိုင်းက ပင်လယ်ပျော်လေးတွေကို သိမ်းကြုံးဆွဲငင် သွားလိုက်တာ ရေပြင်တွေ၊ မြေပြင်တွေ၊ သစ်ပင် တွေမှာ ကြည်လို့မကောင်းအောင် အတုန်း အရုံးပါဘဲလား။ ကျမချစ်တဲ့ကလေး အသက်ရှင်လျှက်မှ ရှိနိုင်ပါတော့မလား။ သူလည်း က လေးမှ မဟုတ်တော့ပဲလေ။ ဘဝအပြောင်းအလဲတွေရဲ့ကြားမှာ ဝမ်းစာရေးအတွက် တခြား နေရာတွေလဲ ရောက်ချင်ရောက်နေနိုင်တာပဲ။ ပင်လယ်ပျော်လေးတွေ သက်တမ်းစေ့စေ့ နေနိုင်ကြပါစေ။
(၂၈. ၉. ၂၀၀၈)
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 6:46 AM ,0comments
Around Machine - UploadaDocument to Scribd
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 9:47 PM ,0comments
ကျမရဲ့ဆင်ဦးစီးက ကျမကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတွေကိုသိစေချင်ရုံလေးပါ။ ကျမတို့ထိမ်းမြားပြီးကာစ ပစ္စည်းမဲ့တို့ ဒေသလေးမှာပါ။ စားစရာဆန်ကလွဲရင် ကျန်တာရှာစားကြရတဲ့နေရာလေးပါ။ ရှာစားရတာက တောထဲက ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အ ကောင်ဗလောင်ရယ်၊ ချောင်းထဲကငါးကလေးတွေရယ်ကို ရှာစားကြရ တာပါ။ ပိုက်ဆံရှိရင်တော့ တညအိပ်သွားရတဲ့ ဈေးဆိုင်လေး တွေရှိတဲ့နေရာမှာလိုချင်တာတွေ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တလကိုတခါလောက်သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ တလစာစားဖို့ ဟင်းချက်ရာ မှာသုံးဖို့ တိုလီနဖာနဲ့၊ ဆပ်ပြာ၊ သွားတိုက်ဆေးလောက်သာပုံမှန်ဝယ်နိုင်ပြီး ဟင်းစားဖို့ ကတော့ တောတိုးရင်းဖြေရှင်းကြတာများပါတယ်။
ကျမကတောတိုးတာဝါသနာပါတယ်။ အရွက်တွေ၊ အသီးတွေခူးရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ မှိုများတွေ့ပြီဆို အပျော်ဆုံးဘဲ။ မှိုကြတော့လဲ တွေ့ခဲပါတယ်။ တွေ့ပြန်ရင်လဲ ဆင်ဦးစီးနဲ့ကျမ စကားများကြရမြဲ။ သူကမှိုကိုသိပ်မကြိုက်သလို မှိုတောင့်မှာစိုးရိမ်တတ်တယ်။ ကျမကတော့မှိုဆိုသိပ်ကြိုက်။ သူကတော့အသားဆို ဘာသားဖြစ်ဖြစ်လာထားဘဲ။ နှစ်ယောက်သားကဆန့်ကျင်ဖက်။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းမဲ့ တွေပီပီ ပြဿနာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ လူတွေကပစ္စည်းနည်းလေ ပြဿနာနည်းလေပဲမဟုတ်လား။ အခုတော့အရင်းရှင်နိုင်ငံမှာ ဝင်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေတွေကိုတွက်ချက်ရှယ်ယာခွဲရင်း တခါတခါ စကားများရလို့ ပစ္စည်းမဲ့ဒေသကိုပြန်သတိရမိပါရဲ့။
တနေ့.. နေ့စွဲအတိအကျမမှတ်မိပေမဲ့ အဲ့ဒီနေ့က ကျမမှိုရတဲ့နေ့။ သရက်ပင်ကြီးတပင်လေတိုက်လို့လဲနေတာကြာပြီ။ အဲ့ဒီပေါ်မှာ ပေါက်နေတဲ့မှိုတွေ။ မှိုစထွက်ကတည်းကတွေ့ပေမဲ့ စားလို့ရ၊ မရ မသေချာလို့မနှုတ်ခဲ့ဘဲ၊ နှစ်ရက်လောက်ကြာမှ တောင်ယာကပြန်လာ တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားကရင်တစု အလုအယက်နှုတ်ကြတာတွေ့မှ ကိုယ်လည်းဝင်နှုတ်တာ ကိုယ့်မှာပါလာတဲ့ဇကာလေးနဲ့ တခါကြော်စာရခဲ့ တယ်။ စားလို့ရတာသေချာတဲ့အကြာင်းပြချက်ရလို့ ဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးမှိုနှင့်တကွ အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ ဆင်ဦးစီးက အင်တင်တင်ဘဲ။ ဒါနဲ့ပိုသေချာအောင် ခပ်လှမ်းလှမ်းကရေချောင်းနားမှာနေတဲ့ အမိုးကြီးတို့လင်မယားဆီမှာ အတည်ပြုချက်ယူလိုက်ရ သေးတယ်။ အမိုးကြီးတို့က စားလို့ရတဲ့အကြာင်းပြောမှ မှိုကြော်ဖို့ပါမစ်ကို ဆင်ဦးစီးကချပေးတာ။ ဒါတောင်ကန်ဇွန်းရွက်ပါမှကြော်ရမယ်ဆိုလို့ တောင်စောင်းနားက ရေအိုင်ဘေးမှာပေါက်နေတဲ့၊ ခူးလွန်းလို့အတက်ထွက်နှေးနေတဲ့ ကန် ဇွန်းပင်က ထွက်ကာစအညွတ် လေး၊ငါးညွတ်ကို မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာအောင် သွားပြီး ခူးလိုက်ရသေးတယ်။
မနက်စာစားပြီးဆင်ဦးစီးတရေးတမောအိပ်တုန်း ကျမလည်း ညစာချက်ဖို့အတွက် ဆန်ဗန်းရယ်၊ မှိုဇကာရယ်ယူပြီး တဲရှေ့က ကွပ်ပြစ်မှာ ထိုင်ပြီး ဆန်ရွေးနေတုန်း ခပ်သဲ့သဲ့အော်သံတခုကြားလိုက်ရတယ်။ ဘာသံပါလိမ့်ဆိုပြီး နားစိုက်ထောင်လိုက်ရင်း အသံကပျောက်သွား ရင်းဖြစ်နေတယ်။ ဘာသံမှန်းဝေခွဲလို့မရဘူး။ တောထဲမှာက အသံအမျိုးမျိုး ကြားရပေမဲ့ ကျမ မခွဲခြားတတ်ဘူး။ မျောက်သံ၊ ချေသံ၊ ဝေးဝေးကလူအော်သံ သဲ့သဲ့ တွေဟာ ကျမနားထဲမှာ တူနေသလိုထင်ရတယ်။ အသံကပျောက်သွားလိုက်၊ ပြန်ကြားရလိုက်နဲ့ ချေအော် သံဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီး ဆင်ဦးစီးနဲ့မတွေ့ခင်က အဖြစ်အပျက် တခုကို သတိယမိသွားတယ်။
ချေမလေးတကောင်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကိုပါ။ ကျမရောက်စကပါ။ ကျမနေတဲ့တဲက ချောင်းဘေးနားမှာ။တဲအရှေ့ချောင်းကို ကျော်ကြည့်လိုက် ရင်တောင်ချေက လူသွားလမ်းလေးကို မြင်ရတယ်။ ကျမတို့တဲအုပ်စုကတောင်နှစ်လုံးကြားကမြှောင်ထဲမှာပါ။ တနေ့ ကျောင်းဆရာတ ယောက်က တဲစုဘက်ကိုလာလည်ရင်းတဲရှေ့ဘက်က တောင်စောင်းမှာ ချေတစုံကိုတွေလို့ လက်ခုပ်တီးပြီးချောက်လွှတ်ပေမဲ့ ချေတ ကောင်က ပြေးသွားပြီး တကောင်ကျန်နေလို့ဆိုပြီး ကျမတို့ရောက်နေတဲ့တဲမှာ သေနတ်လာတောင်းပြီး ပစ်လိုက်တာ ကျောရိုးကိုရှပ် ထိသွားတယ်။ ကံဆိုးလှတဲ့ချေမလေးဟာ လူနေတဲ့ တဲတန်း ဘက်ကို အားကိုတကြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ့ကိုကယ်မယ်အထင် နဲ့ အပြေးလာခဲ့တဲ့ ချေမလေးကို ဝါးလုံးဆွေးတွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်လို့လဲကျနေတုန်း မူဆလင်ဘာသာဝင် စက်ဆရာ တယောက်က သူလည်း ချေသားစားရအောင်ဆိုပြီး တဲထဲကဓားတချောင်းဆွဲပြီး ချေမလေးကို လည်လှီးလိုက်ပါသေးတယ်။ ဘယ်အချက်နဲ့ သေပွဲဝင်သွားရမှန်း မသိလိုက်ရတဲ့ ချေမလေးရဲ့ အသားကို ကျမမစားရက်တော့ပါဘူး။
အတိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတုန်း ဆင်ဦးစီးနိုးလားပြီး ကျမကြားတဲ့အသံကို သူလည်းသတိထားမိသွားပြီး သေနတ်တလက်နဲ့ အ သံကြားတဲ့ဘက်ထွက်သွားလိုက်တာ ကျမတားချိန်တောင်မရလိုက်ပါဘူး။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူးဆင်ဦးစီးပြန်ရောက်လာပြီး မီးခြစ် တောင်းသွားတယ်။ ဘာအရေးကြီးနေမှန်းသိချင်လို့မေးပေမဲ့ စကားပြန်မရခဲ့ဘူး။ နာရီဝက်လောက်ကြာမှပြန်ရောက်လာပြီး အကျိုးအ ကြောင်းပြောပြတယ်။ ဆေးမှုးတယောက် တောလည်ထွက်ရင်း ဖွတ်နဲ့ပက်ပင်းတိုးမိပြီး၊ အနီးကပ်မို့ သေနတ်နဲ့ပစ်လို့မရဘဲ သစ်ခေါင်း ထဲဝင်ပြေးတဲ့ဖွတ်မြီးကို အားကုန်ဆွဲပြီး အော်နေခြင်းဖြစ်သတဲ့။ တနာရီလောက် ကြာအောင် ဖွတ်နဲ့လွန်ဆွဲနေတဲ့ဆေးမှုး၊ (ဆင်ဦးစီးနိုး လာလို့သာ… နို့မဟုတ်လျှင် ဘယ်အချိန်ထိအောင် ဇွဲနှင့်အော်နေမည်မသိ) ဆင်ဦးစီးကို သစ်ရွက်ခြောက်တွေ သစ်ခေါင်းထဲထည့်ပြီိး မီးရှို့ခိုင်းလိုက်မှ ဖွတ်မီးခိုးမွှန်ပြီး ဆေးမှုးလက်ထဲ ပါလာတော့တယ်။
အဲ့ဒီညက ကျမတို့ထမင်းဝိုင်းလေးက စိုစိုပြည်ပြည်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ဆွဲပွဲမှာ အနိုင်ရအောင်ကူညီခဲ့တဲ့ ဆင်ဦးစီးအတွက် ဖွတ်သား ဟင်းတခွက်ကို ဆေးမှုးကလာပို့ ပေးလို့ပါ။ မှိုကြော်နဲ့ဖွတ်သားဟင်း အရသာရှိရှိလေးကို လင်မယားနှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် စား ကြတော့မယ်ပြင်ကာမှ ဆင်ဦးစီးက သူဗိုက်မဆာသေးလို့ စားနှင့်ပါတဲ့။ အင်းလေ.. သူတို့အစီအစဉ် (အဲ့ဒီနေရာမှာ အရက်မသောက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့ နှစ်နာရီ လောက်သွားရတဲ့ထိုင်းရွာက အရက်ဝယ်ပြီး စုသောက်ကြခြင်း) ရှိလို့နေမှာပါအထင်နှင့် တယောက် တည်း မှိုဟင်းများများနှင့်စားလိုက်ရတယ်။ ထမင်းစာပြီး ထမင်းဝိုင်းတခုချန်ကာ ကျန်တာတွေရှင်းပြီး အဆင်သင့်ဆွဲထားတဲ့ စစ်ပုခက်ထဲ ဝင်ပြီးနှပ်နေလိုက်တယ်။ သူတို့ဝိုင်းစုကြပြီဆို ကိုယ်ကဒီလိုပဲ တယောက်တည်းနှပ်နေကြလေ။ ဒါပေမဲ့ဆင်ဦးစီးက ဘယ်မှမသွားဘဲကျမ နဲ့လှမ်းစကားပြောနေခဲ့ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ ထမင်းဝင်စားတော့တယ်။ ကျမက အစီအစဉ်မဖြစ်ဘူးလားမေးတော့ အစကတည်းကမရှိ ပါဘူးတဲ့။ ဗိုက်မဆာလို့ စောင့်နေတာတဲ့။ ကျမအနည်းငယ်တော့အဲ့သြခဲ့ပါတယ်။ အသားဟင်းကြိုက်တဲ့ဆင်ဦးစီးက အသားဟင်းပါတဲ့ နေ့မှ ဗိုက်အဆာနောက်ကျလို့လေ။
အိမ်ထောင်သက် ငါးနှစ်ပြည့်ပြီး သမီးနှစ်ယောက်ရပြီးမှ သူ့ရဲ့အချစ်ကိုကျမသိခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ တနေ့သူ့မိတ်ဆွေတွေနှင့် စကားပြော ရင်း မှိုတောင့်တဲ့အကြောင်းပါလာပြီး ဆင်ဦးစီးဗိုက်အဆာနောက်ကျခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ မှိုဟင်းတောင့်မှာစိုးသောကြောင့် ကျမစားပြီး တ နာရီကြာမှ စားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။ အကယ်၍ နှစ်ယောက်အတူတူစားပြီး တခုခုဖြစ်နေခဲ့လျှင် တယောက်နှင့်တယောက်မကူညီနိုင်ဘဲ ဒုက္ခရောက်မည်စိုးသောကြောင့် သူဆာပေမဲ့ စောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။ ဆင်ဦးစီးရဲ့ ကျမအပေါ်ချစ်ခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အထိ စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိလိုက်သလဲဆိုတာ...။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 4:46 PM , 1 comments
ထွင်းဖေါက်နိုင်တဲ့မြား … ဖြစ်ပါစေသား။
နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့ နှစ်လုံးသားများ …
အမြစ်ပါမကျန် … ဆွဲထုတ်ချေမှုန်းနိုင်စေသား။
ငါရေးနေတဲ့ ကဗျာတပုဒ်နဲ့ 
တော်လှန်သစ္စာ ပန်ပါ၏ ...။ ။
နေ့သစ် ဝဘ်ဆိုက်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 4:21 PM ,0comments
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 4:40 AM ,0comments
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 8:12 AM ,0comments
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 4:41 AM ,0comments
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 6:06 AM ,0comments
ပုံသေနည်းတွေ ပုံသေနည်းတွေ ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျနော်တို့တတွေဟာ ပုံသေနည်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်း ပုံသေနည်းတွေအတိုင်းဖြတ်သန်း ပုံသေနည်းတွေအတိုင်းတွက် ချက်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေ အင်မ တန်များလွန်းတာကလား လူကြီးမိဘ၊ဆရာသမားတွေဆို ခံမပြောရဘူးတို့ ကြီးသူကိုရိုသေရမယ်တို့ စုံနေ တာပဲ၊လူကြီးမိဘတွေရော အမှားဆိုတာ မ ကင်းကြပါဘူး သူတို့တတွေမှားယွင်းနေတဲ့အခါ စံနစ်တကျ ပြန် လည်ပြောဆိုတာတို့ ကြီးတဲ့ သူတွေမှားနေရင်ရော အလကားနေပုံသေနည်းအတိုင်း အရိုအသေပေးနေရမှာ လား မဟုတ် ပါဘူးလေကြီးးကြီး၊ငယ်ငယ်ပါ မှားနေရင်ထောက်ပြသင့်တယ် ရိုသေသင့်တဲ့သူဆိုရိုသေရမှာပဲ မှားနေရင်တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ထောက်ပြပြောဆိုရမှာပဲ အဲ့ဒါတွေကတော့ မိတ်ဆက်သ ဘောလောက်ပါပဲ။
ကျနော်အဓိကပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ (message) ကတော့ ပုံသေနည်းကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ စစ်တပ် တတပ်အကြောင်းပါ ဟာသဆန်ပေမဲ့ ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အင်မတန်အကျိုး ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်ကပေါ့ ရခိုင်ဘက်မှာတပ်စွဲထားတဲ့ ဂေါ်ရခါးတပ်တစ်တပ်မှာပါ အဲ့ဒီ့တပ် မှာရှိတဲ့ ရဲဘော် တွေတော်တော်များများဟာ အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်မတတ်ကြတဲ့ ချင်းနဲ့ ဂေါ်ရခါးရဲဘော်တွေအများ စုဖြစ်ကြပါသတဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ပဲ စစ်တပ်ထဲဘယ်လိုရောက် လာသလဲလို့ ခင်ဗျားတို့မေးကြလိမ့်မယ်..ဟုတ် …ပြောမနေနဲ့ဗျာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကလူလို လို့ ဆွဲခေါ်လာတာတဲ့ဗျာ (ခုခေတ်လိုဆို အတင်းအဓမ္မစစ်ထဲခေါ် လာတာပေါ့ဗျာ) ကဲထား လိုက်ပါတော့ဗျာ စကားမတတ်ပဲဘယ်လိုသင်တန်းပြီးသွားသလဲလို့ ထပ်ပြီးမေးကြ အုံးမယ် ..ဟုတ်စ ရှေ့ကသင်တန်းဆရာကလုပ်ပြ မတတ်ရင်ရိုက်သင်တာပေါ့ဗျာ ဆိုပါတော့ အဲ့ဒါ နဲ့အားလုံး သင်တန်းတွေဘာတွေဆင်း ရှေတန်းတွေဘာတွေထွက် ကြက်တွေဘာတွေခိုး အော်ယောင်သွားလို့ဗျို့ ..အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကကြက်ခိုးရင်အပစ်ကြီးသတဲ့ဗျ ထားလိုက်ပါတော့ ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျို့ တနေ့အဲ့ဒီ့တပ်ကို ဂျင်နရယ် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်) လာစစ်မယ်တဲ့ဗျို့ အဲ့ဒါဗျာ တပ်ရင်မှူးနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှူးတော်တော် အလုပ်ရှုပ် ကုန်ပါရောလား ရဲဘော်တွေကဗိုလ်လို မကိန်(အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်)… လားလား… လာစစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကမျက်နှာ ဖြူလေဗျာ ဗိုလ်လိုပဲ ရဲဘော်တွေကိုမေးတတ်တာတဲ့ဗျို့ ကဲအဲ့ဒါတပ်ရင်းမှူးတွေဗျာ ဘယ်လောက်အကြပ်ရိုက် ကုန်မလဲ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားသာကြည့်ကြတောဗျာ ဒီခေတ်တောင်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဒီလောက် ကြောက်ရတာ အဲ့ဒီ့ ခေတ်ဆိုစဉ်းစားသာကြည်ကြတောဗျာ..
ဒါပေမဲ့နည်းနည်းစိတ်သက်သာစရာရှိတာက (တပ်ရင်းမှူးနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှူးအတွက်ပါ) အဲ့ဒီ့ဗိုလ် ချုပ်က တပ်က ရဲဘော်တွေကို စကားကြီးသုံးခွန်းပဲမေးလေ့ရှိတယ်တဲ့ဗျ အဲ့ဒီ့မှာတပ်မှူးတွေက
ဗြိတိသျှလိုမကိန်တဲ့ ရဲဘော်တွေကို ပုံသေနည်းစသင်တော့တာပဲဗျို ပထမမေးခွန်း(How old are you) မင်းအ သက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာအတွက် ရဲဘော်တွေဖြေဘို့က (Twenty Sir) နှစ်ဆယ်ရှိပါပြီခင်ဗျာပေါ့ဗျာ ဒုတိယမေးခွန်း (How long have you servent been့ here)မင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ ဒါကမေးလေ့ရှိတဲ့ဒုတိယမေးခွန်းတဲ့ဗျ ဒါကလဲလွယ်ပါတယ်လေ(Three Sir) သုံးနှစ်ပါခင်ဗျာလို့သင်ကြသတဲ့ ဟုတ်တယ်လေဗျာ ဒါကလည်း ပျှမ်းမျှခြင်းဆိုငယ်တဲ့ရဲဘော်တွေဆို ဟုတ်နေရော တနည်းအားဖြင့်ကိုက်နေရော ဆိုပါတော့ဗျာ လာပြီဗျို့တတိယမေးခွန်း (Who’s better than your cornel and l-cornel) မင်းတို့တပ်ရင်း မှူုးနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှူး ဘယ်သူကပိုကောင်းသလဲ ဒါလည်းသိတ်မခက်ပါဘူး ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မြွေမသေတုတ် မကျိုးပေါ့လေ နှစ်ယောက်စလုံး အကျိုးရှိစေမဲ့ အဖြေ ပဲပေါ့ (Both Sir) နှစ်ယောက်စလုံးအကျိုးမရှိပေဘူးလား အတူတူပါပဲဆရာပေါ့ဗျာ သူတို့ ဗိုလ်ချုပ်မေးလေ့ရှိတာနဲ့ တပ်ရင်းမှူးတွေ ရဲဘော်တွေကိုသင်တာတွေနဲ့က တော ဟန်ကျ နေရောဗျို့ သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇာတ်ပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဘူးလား သိတ်လည်းစိတ်ပူနေစရာ မလိုဘူးဗျို တခြားတပ်တွေလည်း အဲ့ဒီ့လိုပုံသေမေးခွန်းသုံးခု အစဉ်လိုက်မေးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကပြန်သွား တာပဲတဲ့ ဘာမှပြဿ နာမရှိဘူးတဲ့ ဒီတော့တပ်မှူးတွေလဲ စိတ်းအေးရတာ ပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလာရောဗျို့ တပ်ကိုစစ်ပြီးရဲဘော်တွေကို မေးခွန်းကြီးသုံးခုမေးပါရောဗျာ အဆင်ပြေတယ်ဗျို့ တပ်ရင်းမှူးတွေကသေသေချာချာ သင်ပေးထားတာလေဗျာ (How old are you) လို့မေးတဲအခါ (Twenty Sir) ဟုတ်ဟုတ်ကြီး (How long have you servent been့ here) လို့မေးတော့လဲ (Three Sir) ပေါ့မဟုတ်ဘူး လား ဟန်ကိုကျနေတာပဲ (Who’s better than your cornel and l-cornel) လို့မေးတော့လဲ (Both Sir) လို့ဖြေတော့ ကွက်တိပေါ့ဗျာ ဘာလိုသေးလို့လဲ ပုံစံခွက်ထဲကနေဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာတယ်ဗျာ မေးခွန်းကို ပုံသေ နည်းပဲမေးတယ်လေ ဒီတော့ရဲဘော်တွေကလဲ တပ်မှူးတွေသင်ထားတဲ့အတိုင်း ပုံသေနည်းပဲဖြေတတ်တာကိုး ဒါ ပေမဲကွက်တိဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လား ဒီလိုနဲ့မေးသွားစစ် သွားလိုက်တာဗျာ အဆင်ကိုပြေနေရာကနေ ရဲဘော် တယောက်အလှည့်လည်းရောက်ရော လားလား..ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကရုတ်တရက်ဗျာ မေးခွန်းပြောင်းသွားရော က လား (How long have you servent been here) မေးလိုက်ပါကရော မင်းဒီမှာအမှုထမ်းတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတဲ့လေ ဘာရမလဲရဲဘော်ကလည်းသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလေ (Twenty sir) ပေါ့ဟုတ် တယ်လေသင် ထားတဲ့အတိုင်းဖြေတာပဲ တပ်ရင်းမှူးတွေစိတ်ထဲမှာတော ဟာသွားပါပြီပေါ့ ဒါပေမဲ့ ပေါက်လေတဲ့နဖူးမထူးတော့ ပါဘူးပေါ့။
ရင်တစ်မမနဲ့ပေါ့ ဘသားချောဗိုလ်ချုပ်ကဆက်မေးပါလေရော(How old are you) ရဲဘော် ကလည်းမသိဘူး လေဗျာ တပ်မှူးတွေသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလေ ဖြေလိုက်တာပေါ့(Three Sir) လို့ဖြေလိုက်တာပေါ့ ဗိုလ်ချုပ် ကဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုဆက်ပြီးမေးတာလဲဆိုတာက စစ်မှုထမ်းလာ တာအနှစ်နှစ်ဆယ်ရှိပြီဆိုတဲ့ ရဲဘော်ရဲအသက် သိချင်တာလေ ရာထူးလေးဘာလေးတိုးပေး ရအောင်မဟုတ်လား ဘသားချောရဲဘော်ဖြေလိုက်ပုံက ကျနော် တို့ဇာတ်လိုက်ကျော်ဗိုလ်ချုပ် ရှက်သွားတာပေါ့ဗျာ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေ စစ်မှုထမ်းသက်ကြတော့နှစ်ဆယ် အသက် ကြတော့သုံနှစ်တဲ့လေ ဒီငနဲသားတော့တွေ့ပြီသာမှတ်…ဆိုပြီး (Who’s fool you and me) မင်းနဲ့ငါ ဘယ်သူရူးသလဲလို့..အနိလို…မျက်နှာနီကြီးနဲ့…မေးထည့်လိုက်ကရော ရဲဘော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေးခွန်းတွေပြီးပြီ..ဟူး..ကနဲပုံစံနဲ့ ခတ်ခတ်တည်တည်ဖြေထည့်လိုက်ပါ ကရော လား…....(Both Sir) နှစ်ယောက်စလုံး..တဲ့လေ……..။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 4:16 PM ,0comments
တနေ့တာ ဆူညံလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကိုင်ရိုမြို့ရဲ့ အင်တာနက်ကဖီးဆိုင်တဆိုင် ထဲမှာတော့ နာရီကသန်းခေါင်ကျော်ပြီး ၁ နာရီ ၄၉ မိနစ်ကိုညွှန်ပြနေပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် အာမက်ဒ်မာဟာ ဟာကွန်ပျုတာတလုံးရှေ့မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သူဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီဟာ ဒီက နေ့ပါဆိုရင် ၃ ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀ရဲ့ အခြေခံအသုံးအဆောင်တွေက ကွန်ပျူတာကီးဘုဒ်ဘေးမှာ ပျံ့ကျဲတည်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကားသော့၊ စီးကရက်နဲ့ ဆဲလ်ဖုံးတလုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
မာဟာ ဟာ နှုတ်ခမ်းတွေကို တင်းတင်းစေ့ထားရင်း စာရိုက်နေပါတယ်။ သူစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ အင်တာနက် ဖေ့စ်ဘွတ်က် အကျိုးဆောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတဆင့် လူထုအုံကြွမှုတခုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဟာ အခုတော့ ကီးဘုဒ်ပေါ် လူးလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေကြားထဲက ချော်ထွက်သွားနေပါပြီ။ အိဂျစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွမှုရဲ့ အန္တရာယ်အကျိုးဆက်တွေအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ကွန်ပျုတာမြင်ကွင်း မှာ တင်လာကြပါတယ်။ အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ တယောက်ကရိုက်လာပါတယ်။ အစိုးရက ငါတို့အထဲ ကို စိမ့်ဝင်ထိုး ဖောက်ထားပြီလို့ နောက်တယောက်က ရေးလာတယ်။ အခုလုပ်နေတာက မိုက်မဲဉာဏ်နည်း ရာရောက်တယ်လို့ တတိယတယောက်က စာရိုက်ပါတယ်။
မတ်လကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီး မာဟာနဲ့တခြားအိဂျစ်လူငယ် လေး - ငါးယောက် ဖန်တီးလွှင့်တင်ထိန်း ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က် Facebook စာမျက်နှာမှာ အိဂျစ်ပြည်သူ ၇၄၀၀၀ စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ အများစုဟာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွရေးနယ်ပယ်မှာ လူသစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အိဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလားအလာကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းအိဂျစ်လူမျိုးတချို့ကတောင် အမေရိကန် ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ စတီထွင်ခဲ့တဲ့ လူမှုရေးပေါင်းသင်းသဟာယဖွဲ့မှု ၀က်ဘ်ဆိုက်ဟာ သမတ ဟော့စ်နီမူဘာရတ်ရဲ့ ၂၇ နှစ်တာအုပ်စိုးမှုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အီလက်ထရွန်နစ် နည်းပညာနဲ့စုစည်းတဲ့ အစပြု မှတ်ဖြစ်နိုင်လေမလားလို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
စီစဉ်ထားတဲ့သပိတ်တိုက်ပွဲရက်ဖြစ်တဲ့ မေ ၄ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ အရုဏ်မတက်မီမှာတော့ မာဟာရဲ့ ဖေ့စ် ဘွတ်က် လှုပ်ရှားမှုဟာ အချည်းနှီးဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း တစတစ ပေါ်လွင်လာပါတယ်။ မာဟာနဲ့ တခြား စည်းရုံးရေးသမားတွေက မိမိတို့နောက်လိုက်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြန်တက်လာအောင် ကြိုးစားကြပါ တယ်။ တခုခုတော့လုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ မာဟာက အင်တာနက်ပေါ်မှာပြောပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီမှာတော့ မာဟာ ဟာ ကုလားထိုင်နောက်မှီပေါ်လှဲပြီး အဲဒီညအတွက် ပထမဆုံးအဖြစ်မျက်စိမှတ် တရေးအိပ်ခဲ့ပါ တယ်။ နောက်တနာရီအကြာ ပြန်နိုးလာတော့ ကွန်ပျူတာမြင်ကွင်းမှာ သူ့စာမျက်နှာပိတ်ခံရပြီဖြစ်ကြောင်း စာတန်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူဟာ အီးမေးတွေ စာတွေအများကြီးပို့ခဲ့တာကြောင့် ဖေ့စ်ဘွတ်က်က သူ့ကို စပမ် (ကြော်ငြာ အမှိုက်စာ) စာပို့သမားလို့ သံသယဖြစ်ပြီး ပိတ်ပစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စရာအက်ဘ်ဒဲလ်ဖာတာဟာ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် လူသားရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ ဘာမှမရှိပါဘူး။ “ဖေ့စ်ဘွတ်က်မိန်းကလေး” လို့လူသိများတဲ့ သူမဟာ မာဟာနဲ့တွဲပြီး အင်တာနက်ပေါ်က စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အိဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့ ဧပြီ ၆ ရက်ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ ပြည်သူအားလုံးကို အတိအလင်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲဟာ ချည်မျှင်အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်ခလစာတိုးရေး၊ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျ ဆင်းရေး အလုပ်ရပ်သပိတ်မှောက်ပွဲနဲ့ တိုက်ဆိုင်မိသွားတဲ့အခါ အိဂျစ်နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အထူးခြားအကြီးကျယ်ဆုံး နိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ပေါ်သွားပါတယ်။
အဲဒီအခါ မာဟာကပဲ မူဘာရတ်ရဲ့ အသက် ၈၀ ပြည့်မွေးနေ့ကိုချိန်ရွယ်တဲ့ မေ ၄ ရက်ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးစီးစီ စဉ်ခဲ့ပါတယ်။ “ဖေ့စ်ဘွတ်က်အုပ်စုဝင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အရင်ကဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှာမှ မပါခဲ့ဖူးဘူး၊ ကျနော်တို့ဟာ နိုင်ငံရေးအုပ်စုမဟုတ်ဘူး” လို့ မာဟာက မေ (၄) ရက်ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီ နှစ်ရက်အလိုက ပြောပြခဲ့တယ်။ “ကျနော်တို့ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်က ပြည်သူလူထုတွေ မိမိတို့အခွင့်အရေးကို သိမြင် နားလည်လာပြီး ကိုယ့်ကိုတုပ်နှောင်ထားတဲ့ လက်ထိပ်တွေ သံခြေကျင်းတွေကို ဘယ်လိုရိုက်ချိုးရမလဲ ဆိုတာ သိလာအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်” လို့ဆက်ပြောပါတယ်။
အစိုးရက သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ တွက်ဆမိတဲ့အတွက် ခေါင်းဆောင်တွေ က ခရမ်းသီး၊ သခွားသီး စတဲ့ နိုင်ငံရေးပုံမပေါက်တဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က်အုပ်စုခွဲလေးတွေ ထပ်ဖန် တီးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အယူအဆတွေ ဖလှယ်ကြ၊ မဟာဗျူဟာတွေ ဆွဲကြပါတယ်။ မွတ်စလင်နိုင်ငံရဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်မဟုတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မေ (၄) ရက်မှာ အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲ ကိုယ့်အိမ်ထဲ မှာပဲ နေကြဖို့ပြည်သူလူထုကို ပန်ကြားဆော်သြခဲ့ပါတယ်။ သတ္တိအရှိဆုံးလူတွေကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာစုဝေးပြီးဆန္ဒပြကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စုဝေးဖို့နေရာတွေကို ဖုံးမက်ဆေ့ဂ်ျတွေနဲ့ အကြောင်းကြားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ သတ္တိသိပ်မရှိသူတွေကိုတော့ အနက်ရောင်တီရှပ်တွေဝတ်ကြဖို့ သို့မဟုတ် အိဂျစ်နိုင်ငံ တော်အလံတွေ မိမိတို့အိမ်တံခါးပေါက်တွေ အိမ်ခေါင်မိုးတွေမှာ ထောင်ဖို့ဆော်သြထားပါတယ်။ အကြမ်း ဖက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေအားလုံးကို ဆန္ဒပြပွဲစည်းရုံးစီစဉ်သူတွေက ပယ်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
မာဟာ့အပြောအရ အတက်ကြွဆုံး အခိုင်မာဆုံးလူအများအပြားဟာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ကိုင်ရိုကောလိပ် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ အစဏရားမူစတာဖာဟာ အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီး တခါမှဆန္ဒမပြခဲ့ဘူး၊ လှုပ်ရှားမှုတခုခုမှာ မပါခဲ့ဖူး၊ မဲမပေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူမဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်က် အုပ်စုထဲ စကတည်းကပါခဲ့ပါတယ်။ သူမကို ဧပြီ ၆ ရက်မှာ ရဲကခဏထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို အဖမ်း ခံရလို့ သူမစိတ်ဓာတ်က ပိုခိုင်မာသွားပါတယ်။ “ကျမလုပ်နေတာ ကျမရဲ့ ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ် တယ်ဆိုတာ ကျမ သဘောပေါက်သွားတယ်” လို့ မူစတာဖာက ပြောတယ်။
လှုပ်ရှားသူတွေဟာ သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေထဲက တချို့ကို သဘောပေါက်ကြ ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုတခုကတော့ အိဂျစ်ပြည်သူ သန်း ၈၀ မှာ လေးပုံတပုံကျော်ဟာ စာမတတ်ဘဲ လူဦးရေ ရဲ့ ၈ ရာခိုင်နှုန်းဘဲ အင်တာနက်သုံးနိုင်တယ်ဆို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်း သတင်းပျံ့နှံ့ အောင် ဖေ့စ်ဘွတ်က်အုပ်စုဝင်တွေက နံရံတွေမှာ မှုတ်ဆေးတွေနဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ လှုံ့ဆော်စာတွေ ရေးဖို့၊ နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ အလံတွေ တံခွန်တွေလွှင့်ထူဖို့ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ငွေစက္ကူတွေ၊ အထူး သဖြင့် ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေ အသုံးများတဲ့ တန်ဖိုးနိမ့်ငွေစက္ကူတွေပေါ်မှာ ကြွေးကြော်သံတွေရေးတာမျိုး လည်း လုပ်ကြပါတယ်။
မေ ၂ ရက်မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက မာဟာ၊ မူစတာဖာနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က်အုပ်စုဝင် နောက်တယောက်ကို ကိုင်ရိုမြို့လယ်မှာ ပထမတော့ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အတင်းလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ မာဟာက ဆိုင်တဆိုင်ထဲဝင် ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီး လွတ်သွားပါတယ်။ မူစတာဖာကတော့ ကိုင်ရိုမြေ အောက်ရထားဘူတာရုံထဲဝင်ပြေးပြီး အမျိုးသမီးသီးသန့်တွဲပေါ်တက်ပြေးတဲ့အခါ နောက်ကလိုက်လာတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ၀င်တွေကို တခြားရထားစီး အမျိုးသမီးတွေက ပိတ်ဆို့ကာဆီးပေးလို့ လွတ်သွားပါတယ်။ မာဟာဟာမိမိရဲ့ သုံးလသမီးနဲ့ဇနီးကို နှုတ်ဆက်ပြီး မြေအောက်ပုန်းလျှိုးရပါတော့တယ်။
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ ပြည်သူလူထုတွေကို အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနေဖို့ ဖေ့စ်ဘွတ်က်အဖွဲ့က ဆော် သြတာကို ပျက်ရယ်ပြုကြပါတယ်။ ဒါဟာ မလှုပ်မယှက် မတက်မကြွလူမျိုးတမျိုးက ပိုပြီးမလှုပ်မယှက် မ တက်မကြွတဲ့နည်းနဲ့ ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ် လို့ဝေဖန်ပါတယ်။
မေ ၄ ရက်နီးလာတာနဲ့အမျှ အစိုးရဘက်ကလည်း လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ မဟာလာချည်မျှင်စက်ရုံအလုပ် သမားတွေကို ဘောနပ်စ် ဆုကြေးတွေပေးတာ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို လစာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးပေးတာ တွေလုပ်ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေကို တစုံတရာလျော့ပါးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရက ဆဲလ်ဖုံးကုမ္ပဏီတွေကို မက်ဆေ့ဂ်ျပို့တာတွေအားလုံး ပိတ်ပင်ဖို့၊ နာမည်မှတ်ပုံမတင်တဲ့ ဖုံးပိုင်ရှင် တွေအတွက် အသံပို့ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို ပိတ်ပင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပါတယ်။ မူဘာရတ်ရုပ်ပုံ ကြော်ငြာဘုတ် ကြီးကို ဖြိုလှဲချနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဖြန့်ချိထုတ်လွှင့်တဲ့ ရုပ်သံလွှင့်သမားတဦးကိုလည်း တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။
မေ ၄ ရက်မနက် အိပ်ရာကနိုးလာတော့ ကိုင်ရိုမြို့သားတွေဟာ အဓိကလူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ ကြော် ငြာဘုတ်အသစ်ကြီး တွေ့မြင်ရပါတယ်။ “လူငယ်တွေ အိဂျစ်ပြည်ကို ချစ်ကြသည်။” “တွေးခေါ်တတ်သော ပြည်သူများက ဖန်တီးကြသည်၊ မဖျက်ဆီးကြ။” လို့ ရေးထားပါတယ်။
မေ ၄ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီမှာ ကိုင်ရိုမြို့လယ်လမ်းတွေပေါ်မှာ ထုံးစံအတိုင်း ကားတွေပြည့်ညပ်နေပါ တယ်။ လူထုဆန္ဒပြပွဲဖြစ် မယ့်လက္ခဏာတော့ လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ မာဟာကမြို့ထဲ ကားတစီးနဲ့လှည့်ကြည့် နေရင်း ဇနီးဆီကဖုံးခေါ်တာကို ပြန်ဖြေရပါတယ်။ ဇနီးသည်က သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် အင်မတန့်ကို စိုး ရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။ သူမဟာ ကလေးငယ်ကိုခေါ်ပြီး မိဘတွေအိမ် ပြန်သွားနေခဲ့တယ်လို့ မာဟာကို ပြောပြ တယ်။
အဓိကဆန္ဒပြဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကိုင်ရိုမြို့ထဲကနေရာမှာတော့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အသင့်နေရာယူ ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အနက်ရောင်တီရှပ်တွေ ၀တ်ထားတဲ့ လူငယ်လေး - ငါးယောက်က လက်ကမ်းစာ ရွက်တွေ ဝေကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတချို့က ရဲတွေ လုံထိန်း တွေဝိုင်းထားတဲ့ကြားထဲက ကြွေးကြော်သံ တွေအော်ကြတယ်။ လူငယ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်က အဲဒီအမျိုးသမီးတွေဆီ သွားပေါင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါ ရဲ တွေက တွန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ မြို့တော်တွင်း တခြားနေရာတွေမှာလည်း တချို့ကတော့ ဆန္ဒပြဖို့လှုံ့ ဆော်ထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြပါတယ်။
ဆင်းရဲသားတွေက လူလတ်တန်းစားတွေထက်ပိုပြီး ဆန္ဒပြပွဲရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ကြတယ်လို့ အင်ဘာ ဘာ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်က အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ဟစ်ဘာအီမမ်က ပြောပါတယ်။ “အင်တာနက် တက်တဲ့လူတွေက တကယ့်ဒုက္ခကို မခံစားရဘူးရှင့်။ ဆန်ရဖို့ တန်းစီတိုးရတာတွေကို သူတို့မသိဘူး” လို့ သူမကပြောတယ်။ သူမဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ခင်းကျမှ အိမ်ပြင်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်က်အ ကြောင်း သူမကြားဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမနေတဲ့ ရပ်ကွက်ကလူအများကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်က်ဆိုတာကို တခါ မှမကြားဖူးပါဘူး။
ညနေစောင်းခါနီးတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်က်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆန္ဒပြရေးစာမျက်နှာမှာ မှတ်ပုံတင်ထားသူ ၇၄၀၀၀ မှာ အမျိုးသား ၃ ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၁၂ ယောက်၊ စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်ဘဲ လူစုဝေးပြီးဆန္ဒပြဖို့ စိတ်အား ထက်သန်တာ ကျန်ပါတော့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ မာဟာ မပါ ပါဘူး။
မူစတာဖာကို ရဲတွေက ပင်မဆန္ဒပြနယ်မြေက မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီးနောက် မာဟာဆီဖုံးဆက်ပါတယ်။ “ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ။”
မာဟာကပြောလိုက်တယ်။ ညနေစောင်းတဲ့အခါမှာတော့ မူစတာဖာငိုနေပါပြီ။ နာကျည်းခါးသီးစွာနဲ့ သူမ နာမည်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုထဲက ပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာ အုပ်စုထဲပြန်ဝင်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ပြန်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မာဟာက သူ့မိသားစုမနေတော့တဲ့အိမ်ကို ရက်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်အ သွားမှာ ရဲတွေဖမ်းတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီနောက် ရဲတွေနဲ့လုံထိန်းတွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ ကနေ ကြာသပတေးနေ့ မနက် ၃ နာရီအထိ သူ့ကိုရိုက်နှက်ပါတယ်၊ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်၊ ကြိုးချည်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲပါတယ်၊ ယောက်ျားချင်း မုဒိမ်းကျင့်မယ်လို့လည်း ခြိမ်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ တို့က ဖေ့စ်ဘွတ်က်အုပ်စုထဲဝင်တဲ့ ပါ့စ်ဝါဒ်တွေတောင်းတယ်။ အုပ်စုဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသူတွေရဲ့ နာမည်ရင်းတွေတောင်းတယ်။ တကယ်တော့ ဖေ့စ်ဘွတ်က် အုပ်စုတွေမှာ ပါ့စ်ဝါဒ်မလိုပါဘူး။
မာဟာ ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါ ပွန်းပဲ့ရာတွေ အသျှိုးရာတွေ ပါလာတဲ့အပြင် နားတဖက်လည်းလေးသွားပါ တယ်။
“ဒီတခါတော့ မင်းနားရွက်ကို ဆွဲရုံဘဲဆွဲလိုက်တာကွ။ နောက်တခါကျရင်တော့ တကယ်ချမှာ” လို့ လုံထိန်း အရာရှိတယောက်က မာဟာကို ပြောလိုက်ပါသတဲ့။
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 5:32 AM ,0comments